मन्थलीलाई समृद्ध पर्यटकिय स्थल यसरी बनाउन सकीन्छ, सधै धुलोधुँवामा कति बस्ने ? -
२४ कार्तिक २०७६, आईतवार २१:०२ Highway KhabarLeaveaComment on मन्थलीलाई समृद्ध पर्यटकिय स्थल यसरी बनाउन सकीन्छ, सधै धुलोधुँवामा कति बस्ने ?
संघियता पछी स्थानिय सरकार बने सगै रामेछापको सदुमुकाम मन्थली बजारको चहल पहल हराउदै जादै थियो, मन्थली मात्रै पनि हैन सबै जिल्ला सदारमुकामको अवस्था यस्तै हुदै जादा, तर मन्थलीलाई एउटा कुराको कक्ताली नै पर्यो । जुन कुरा हो, रामेछापकप–लुक्ला हवाई उडान ।
काठमाण्डौ बाट सगरमाथा जाने पर्यटक र लुक्ला एयरपोर्ट उड्ने जहाज सबै मन्थली–लुक्का उडान हुन सुरु गर्यो कारण काडमाण्डौंको एयरपोर्टमा डोमेस्टिक एयरको कारण ट्राफिकिङ्ग । यसको बिकल्प थियो लुक्ला टु मन्थली यो कुनै योजना हैन फिउचर प्लान पनि हैन मास्टर प्लान र भिजन पनि हैन बस् एउटा बिकल्प थियो भयो ।
यस पछी सुक्दै गएको मन्थली पर्यटकले खचा खच भरिन सुरु गर्यो । ब्यापरी र होटल ब्यवासायीहरुको व्यवासय बबाल चल्न सुरु गर्यो तर पर्यटकले भने सास्ती बेहोरी रहेका छन । व्यापार बढे सगै हरेक कुराको भाउ आकासीएको छ मन्थलीमा । पर्यटक ठगिन सुरु भो, काला बजारीहरुले पर्यटकर्ला ठगेको ठगेई छन् । सरकार वा तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरु ट्वाल्ल परेर बसेका छन जस्तो लाग्यो नी । के हा ?
यो अवासर सबै जिल्ला सदरमुकामले कहा पाउछ ? पाउदैन । मानिस समय सगै चल्न जानेनन भने अवसरहरु अभिसाप बन्न सक्छ । खालि बिकास बिकास भनेर नाराबाजी, भाषण र चोक चोकमा चिया गफ हानेर बिकास हुन्छ की हुदैन ? अर्को भौतिक बिकास मात्रै बिकास हैन मानिसको चेतना र मानवताको बिकास सगै बुद्धिको पनि बिकास हुनु पर्छ । बुद्धि भनेको के अरुलाई फसाएर राज्य दोहन गरेर करोडौ कमाउनु हो र पैसा कमाउनेको मात्रै बुद्धि हुने अरुको नहुने हो? समाज बिकृत हुदै छ शिक्षाको नकरात्मक असर ।
मन्थली बजारको बस्तु अवस्था
यो अति गर्मी र खोच ठाँउ हो । यस स्थानमा पर्यटक लोभ्याउन धेरै सुबिधाहरुको बिकास हुनु पर्छ । स्वयं हामी साधरण जनतालाई समेत मन्थली एक्कसी गएर बस्न गर्मी याममा कठिन हुन्छ तर अन्य सिजन वा हिउदमा भने अछा ठाउ हो यहा जाडो पटक्कै हुन्न ।
यो यस्तो ठाउ जिल्ला भरिका अनेक पार्टीका नेता सबै जाने बस्ने ठाउ, जिल्लाका हाकिमहरु, सिडियो, डिएसपी, एलडियो, जिशिअ, वातावरणका मानिस सबै बस्ने ठाउ । नेताले बिकास र क्रान्तिका क्रान्तिकारी भाषण हप्तै पिच्छे ठोक्ने ठाउ, शिक्षित र चेतनशिल भन्ने मानिस बस्ने, जाने ठाउ, सांसद, मन्त्री, मेयर सबै जाने बस्ने ठाउ, जिल्लाका सबै बुद्धिजिबी पुग्ने ठाउ, बिद्यार्थिहरुले नाराजुलुस गर्ने ठाउ, जिल्लाको ठुलो ब्यापारिक केन्द्र तर अवस्था लाज मर्दो छ ।
एउटा धुलो हिलो मुक्त गर्न सकेको छैन, फोहोर ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, ब्यवासाय व्यवस्थित बनाउन नसकेको ठाउ, हाट लाग्ने ठाउ हेर्दै बमिट आउछ संरचना राम्रो छैन, कुनै कुराको व्यवस्थापन छैन, वरिपरिका वातावरण सरसफाई छैन, घरहरु जता ततै अब्यवास्थित बनाउन दिएको छ, होटल टहराहरु लगाएत अनेक कुरुप संरचनाहरु बनेका छन, उद्योगहरु संचालन गर्ने कुनै ठाउ तोकियको छैन, खोला, नदी किनाराको सुरक्षा सहितरिकाले गरेका छैनन हेर्दै लाथालिङ्ग, भताभुङ्ग कुनै मास्टर प्लान छैन यस्तै यस्तै अनेकौ अस्तव्यस्त ठाउ हुदैछ । यस्ता मानिसहरु बस्ने ठाउ यती बिजोग अहिलेको समयमा लाज हुन्न ?
मन्थली पहिले देखी नै आन्तरिक पर्यटकिय सानो नगरी हो । झन अहिले लुक्ला उडान मन्थली बाट सुरु भए पछी बिदेशी पर्यटकले समेत खचा खच भरिएको ठाउ, भबिष्य बोकेको अवसर बोकेको संभावना बलियो भएको ठाउ । योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भए पछी मन्ली बिमानस्थललाई स्तोन्नती गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
अहिले संचार माध्यम र बिभिन्न मानिसहरु बाट सुनिन्छ यँहा पर्यटकले सुबिधा हैन सास्ती पाए रे । पर्यटक लुटिए रे भनेर । सफा सुन्दर र सुबिधा सम्पन्न होटलहरु छैनन, एसिरुमहरु छैनन, एउटै बोतल पानिको सय रुपैया लिन्छ रे, साधरण चियाको पनि तोकीए भन्दा धेरै लिन्छन रे । साधरण रुमको पनि हजारौ रुपैया लिन्छन अझ बिदेशी त्यो पनि खैरो र गोरो छाला देख्ने बितिकै हरेक सामानको भाउ अचाक्ली गर्छन र लुट्छन रे ।
अवस्था जे जस्तो होस अब तुरुन्तै यसो गर्न म सबै तहका सरकार सरोकारवाला, सम्बन्धित निकाय र जनता सबैलाई यस स्थानको भबिष्य निर्माणमा संवेदनशिल र जिम्वेवार भई बिकास र प्रगती गर्न सुझाव दिन चहान्छु ।
 मन्थली नगरपालिकाले तुरुन्तै दैनिक रुपमा सरसफइका कार्यक्रमहरु संचालन गरोस् । बजेट र निति नियम सहित कर्मचरी संयन्त्र र प्रबिधी संयन्त्र लिएर एक्समा आइ हालोस । एक दिन चार जाना कुचो बोकेर फेसबुक रमाईलो गरेर हुदैन ।
 जनचेतना लिएर कानुन छपाएर कार्यक्रमको उदेश्य सहित ब्रोसियर बोकेर मेयर सहित प्रत्यक घर, अफिस र सटर सटरमा पुगोस् । सफा मन्थली, सुन्दर र सभ्य मन्थलीको ब्यानर बोकेर जनताको कानकानमा चेतना दिन आवश्यक छ ।
 तामाकोशी नदी नजिकै छ योजनाहरु भए ठिकै छ चाडो गर्नूस, नभए तामाकोशीको पानी लिफ्ट गरेर मन्थली पखाल्ने योजना बनाइ हाल्नुस बरु प्रत्यक धारा बाट जनता सग पैसा उठाउनुस दिन्छन ।
 ग्रिन मन्थली, स्वच्छ मन्थली अन्तरगत पुरै मन्थली केही बर्षमा हरियाली मन्थली बनाउनुस, सकिन्छ यो सानो कुरा हो । लाखौ बिरुवा रोपी हल्नुस । जनतालाइ बिरुवा बाढ्नुस र त्यसलाई संरक्षण गरेर केही बर्षमै जताततै हरियाली बनाउनुस ।
 उद्योगलाई अन्य बजार भन्दा टाढा पुर्याउनुुस यस्ले वातावरणमा अनेक समस्या ल्याउछ घरेलु बाहेक सबै उद्योग एक व्यवस्थित ठाउमा प्लानिङ्ग गरेर सार्नुस ।
 अफिस घर टहराको बिभिन्न थ्री डि नक्सा बनाएर जनतालाई दिनुस सबै घरहरुको बाहिरी रंग एकै किसिमका बनाउनुस किन यो पर्यटकिय नगर हो ।
 मन्थली हाट लाग्ने ठाउको मास्टर प्लान बनाएर आधुनिक शैलिमा व्यवस्थित बनाई हाल्नुस ।
 स्कुुल कलेज अफिस र घरवरिपरी सरसफाई नगरे फुल बिरुवा नलगाए कारवाही गर्नुस प्रसासन सबै त्यही छन ।
 पर्यटकलाई दिने सेवा सुबिधा सम्पन्न बनाउन अनेक कोषिस गर्नुस घुम्ने, बस्ने, टाइमपास गर्ने ठाउ र श्रोत साधनको व्यवस्था गरी हाल्नुस ।
 पर्यटकलाई ठग्लान सबै ठाउको निरिक्षण दिनै पिच्छे गर्नुस । अनुगमन गरी फटाह ठगहरुलाई कार्वाही गरेर तह लगाउनुस प्रहरी र अदालत तेही छ ।
 बिभिन्न दैवीक बिपतीका लागी एउटा बिशेष योजना बनाउनुस ।
 मैसम खराब हुदा पर्यटक रोकिने भएमा रामेछाप, सेलेघाट, खिम्ती, किर्ने घुमघामको संभावना नियाल्नुस ।
 बिभिन्न ठाउमा सार्वजानिक शौचलाय बनाउनुुस । कोशी किनाराहरुमा ठुला ठुला रुखहरुको बिरुवा रोप्नुस, बिभिन्न ठाउमा जस्तै खोला, नदी, किनार र डाडाहरुमा चिटिक्क चिटिक्कको सितल टहरा बनाई दिनुस । नत्र लाज हुन्छ बिदेशिहरुले गिल्ला गर्छन हेप्छन ।
यस्तै अन्य धेरै कुराहरुको प्लानिङ्ग र सुधार गर्न सकिन्छ । यस्ता मास्टर प्लान भएका मानिसहरु धेरै छन् बु् उनिहरुलाई अवसरको खाचो छ ।
 काठमाण्डौं देखी मन्थली सम्म प्रत्यक पचास कि.मी.दुरिको बिचमा साधन श्रोत सहित सडक मर्मत संहारको स्थायी टोली राख्नुस जस्ले सडक बिग्रन साथ टाल्न र सडकमा खसेका ढुङ्गा माटो पहिरो र फोहोर तुरुन्तै फाल्न सकोस ।
 मध्यपहाडी राजमार्ग जति सक्दो चाडो र भरपर्दो बनाइ हाल्नुस जस्ले गर्दा पर्यटक मन्थली सजिलै र चाडै पुग्न सकोस ।
 मन्थलीको सबै तिरको सडक स्थायीरुपमा प्लानिङ्ग सहित तुरुन्तै ब्यवस्थित गरि हाल्नुस ।
 सक्ने भए मन्थली नगरपालिकाको प्लानिङ्गको थ्री.डि. एनिमेसन र डि.पि.आर. बनाउने प्रयत्न गर्नुस । यस्ता अनेकौ प्रयत्न नगरी कुनै कुराको बिकास हुदैन ।
यो राष्ट्रिय इसु हो केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सबै सरकारको जिम्वेवारिको कुरा हो । सबै तहले मन्थली व्यवस्थापनमा बिषेश काम गरोस चासो मात्रैको काम छैन काम गर्नुस काम । हावादारी गफ, कुर्सीका धाग, बकम्फुसे भाषणको कुनै काम छैन यस्ता कुरा बाट जनता आजित छन जस्को यथार्त अनुभुती म सँग छ । क्रन्तिकारी गफ र भाषण मात्र कहिले सम्म ?
लेखक गोकुलगंगा रामेछापका हुन । उनि कन्सेप्ट डेभलपर तथा मास्टर प्लानर समेत हुन
‘अघोरी बाबा’ पक्राउ, यस्तो छ आरोप
शिक्षकको तलबका लागि रु १४ लाख सहयोग
४ कार्तिक २०७६, सोमबार ०६:१३ Highway Khabar
भारत र चीनतर्फका सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय
५ मंसिर २०७६, बिहीबार १७:२० Highway Khabar
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:२८ Highway Khabar